Goverment Organization | Myanmar Builders Guide - Best Building and Construction guide in myanmar
Ministry of President Office ( နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး )
Address : Nay Pyi Taw
Phone : 409077
Attorney General ( ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး )
Fax : 404106
Website : www.oag.gov.mm
Central Bank of Myanmar ( မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် )
Phone : 418509, 418230, 418508, 418502, 418510
Fax : 418515
Account Department ( စာရင်းဌာန )
Phone : 418231, 418346
Fax : 418513, 418516
Currency Administration Department ( ငွေကြေးလုပ်ငန်း အုပ်ချုပ်မှုဌာန )
Phone : 418415, 418220
Fax : 418285, 418287
Administration and Human Resources Department ( စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန )
Phone : 418203
Fax : 418270
Information and Security Department ( သတင်းနှင့် လုံခြုံရေးဌာန )
Phone : 408208, 418232
Fax : 418258
Administration and IT Department ( စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် နည်းပညာဌာန )
Phone : 418909
Fax : 418152
Internal Audit Department ( ဘဏ်တွင်း စာရင်းစစ် ဌာန )
Phone : 418247, 418217
Fax : 418267
Banking Regulation and Anti-Money Laundering Department ( ဘဏ်လုပ်ငန်း ဥပဒေစည်းမျဉ်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးဌာန )
Phone : 418281
Fax : 418161
Monetary Policy Affairs and Financial Institutions Regulation Department ( ငွေကြေး မှုဝါဒရေးရာနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း ဥပဒေစည်းမျဉ်း ဌာန )
Phone : 418207
Fax : 418507
Monetary Policy, Research and Statistics Department ( ငွေကြေးမူဝါဒ၊ သုတေသနနှင့် စာရင်းအင်းဌာန )
Phone : 418226, 418216, 418370, 418272
Fax : 418262
Government Office ( ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး )
Phone : 409142
Hluttaw Office ( လွှတ်တော်ရုံး )
Phone : 409423, 409428, 409075
Amyotha Hluttaw ( အမျိုးသား လွှတ်တော်ရုံး )
Phone : 591199, 591004, 591386, 591229
Fax : 591269
Website : www.amyothahluttaw.gov.mm
Pyithu Hluttaw ( ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရုံး )
Phone : 591338, 591192, 591176, 591177, 591195, 591279, 591257, 591282, 591066, 591618, 591511, 591176, 591278
Fax : 591437, 591446, 591440
Website : www.pyithuhluttaw.gov.mm
Pyidaungsu Hluttaw ( ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံး )
Phone : 591215, 591183, 591386, 409238, 591189
Fax : 591294
Website : www.myanmarparliament.gov.mm
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation ( စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာန )
Fax : 408049, 410036
Phone : 410004, 408051, 408270, 408057, 408046, 410033, 410031
Website : www.mali.gov.mm, www.myancoop.gov.mm
Agricultural Land Management and Statistics Department ( လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်း ဦးစီးဌာန )
Phone : 410250
Livestock Breeding and Veterinary Department ( မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီး ဌာန )
Phone : 408466, 408464, 408262, 408201
Fax : 408342
Website : www.lbvd.gov.mm
Agricultural Mechanization Department ( စက်မှုလက်ယာ ဦးစီးဌာန )
Phone : 431213
Planning Department ( စီမံကိန်းဦးစီး ဌာန )
Phone : 410554
Agricultural Research Department ( စိုက်ပျိုးရေး သုတေသန ဦးစီးဌာန )
Phone : 416592
Rural Development Department ( ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 409030, 409415
Agriculture Department ( စက်မှုလက်ယာ ဦးစီးဌာန )
Phone : 410143
Small Scale Industries Department ( အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန )
Phone : 410397, 410275, 410029, 410027
Fax : 410540
Co-Operative Department ( သမဝါယမ ဦးစီးဌာန )
Phone : 410024, 410040
Fax : 410339
University of Veterinary Science ( မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် )
Phone : 416525~6, 416529, 416530
Fax : 416528
Website : www.uvsyezin.edu.mm
Fisheries Department ( ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန )
Phone : 408474, 418537
Fax : 408475
Website : www.dof.gov.mm
Yesin Agricultural University ( ရေဆင်း စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် )
Phone : 416518
Irrigation and Water Management Department ( ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 410539
Ministry of Border Affairs ( နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 40902, 409022, 409233
Fax : 409448
Education and Training Department ( ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 409034, 409031, 409213, 409419, 409224, 409538
Fax : 409419
Progress of Border Areas and National Races Department ( နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 409039, 409037, 409038, 409355
Fax : 409400
Ministry of Commerce ( စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန )
Fax : 408004, 408256, 408263
Phone : 408265, 408266, 408252, 408018, 408002
Website : www.commerce.gov.mm, www.myanmartradenet.com.mm
Consumer Affairs Department, Office No.(52) ( စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၅၂) )
Phone : 408244
Fax : 408243
Myanmar Trade Promotion Organization, Office No.(52) ( မြန်မာ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၅၂) )
Phone : 430452
Fax : 430470
Account Division ( ငွေစာရင်း ဌာနခွဲ )
Phone : 430142
Fax : 430141
Administrative Division ( စီမံရေးရာ ဌာနခွဲ )
Fax : 430155
Phone : 430296
Fax : 430126
Domestic Trade Division ( ပြည်တွင်း ကုန်သွယ်မှု ဌာနခွဲ )
Phone : 430450
Consumer Affairs Division ( စားသုံးသူရေးရာ ဌာနခွဲ )
Phone : 430207
Fax : 430203
Planning and Account Division ( စီမံကိန်းနှင့် ငွေစာရင်း ဌာနခွဲ )
Phone : 430474
Fax : 430194
Information Technology and Quality Management Division ( သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာနှင့် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာနခွဲ )
Phone : 430131
Fax : 430133
Strategic Trade Promotion Division ( မဟာဗျူဟာ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး ဌာနခွဲ )
Phone : 430458
Fax : 430138
Policy Studying Planning and Statistics Division ( မူဝါဒ လေ့လာရေးနှင့် စီမံကိန်း စာရင်းအင်း ဌာနခွဲ )
Phone : 430132
Fax : 430127
Trade Development Division ( ကုန်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာနခွဲ )
Phone : 430295
Fax : 430128
Product Safety Division ( ထုတ်ကုန် လုံခြုံစိတ်ချရမှု ဌာနခွဲ )
Phone : 430196
Fax : 430218
Trade Information and Research Division ( ကုန်သွယ်မှု သတင်း အချက်အလက်နှင့် သုတေသန ဌာနခွဲ )
Phone : 430136
Trade Fair and Trade Centres Division ( ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် ကုန်သွယ်မှု ဗဟိုဌာနများခွဲ )
Phone : 408425, 430128
Trade Department ( ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 408405
Fax : 408328
Phone : 408238
Fax : 408406
Internal Audit Division ( ဌာနတွင်း လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်း စစ်ဆေးရေး ဌာနခွဲ )
Phone : 430390
Fax : 430192
Phone : 408230
Fax : 408484
Planning and Statistics Division ( စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်း ဌာနခွဲ )
Phone : 408329
Fax : 408015
Bilateral Trade Relation Division ( နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု ဆက်ဆံရေး ဌာနခွဲ )
Phone : 408489
Fax : 408417
Regional Economic Co-Operation Division ( ဒေသတွင်း စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ဌာနခွဲ )
Phone : 408320
Fax : 408321
Border Posts Coordination and Supervision Division ( နယ်စခန်းများ ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေး ဌာနခွဲ )
Phone : 430202
Fax : 430195
Trade Education Division ( ကုန်သွယ်မှု ပညာပေးရေး ဌာနခွဲ )
Phone : 408312
Fax : 408260
Competition Policy Division ( ယှဉ်ပြိုင်မှု မူဝါဒဌာနခွဲ )
Phone : 408504
Fax : 408506
Trade Policy Division ( ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒဌာနခွဲ )
Phone : 408281
Fax : 408414
Export/Import Division ( ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ဌာနခွဲ )
Phone : 408014
Fax : 408176
WTO and International Trade and Related Division ( အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ ဌာနခွဲ )
Phone : 408315
Fax : 408311
Information Technology Division ( သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာဌာနခွဲ )
Phone : 408485
Fax : 408226
Ministry of Construction ( ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 407584, 407510, 407590
Website : www.ministryofconstruction.gov.mm
Highways Department ( လမ်းဦးစီးဌာန )
Phone : 407204, 407022, 407603, 407425
Fax : 407182
Urban and Housing Development Department ( မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 407071, 407315, 407579, 590508, 407668
Fax : 407579
Bridge Department ( တံတားဦးစီးဌာန )
Phone : 407069, 407602, 407452, 407276
Fax : 407466
Building Department ( အဆောက်အဦ ဦးစီးဌာန )
Phone : 407070, 407581
Fax : 407070
Ministry of Defence ( ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 404445, 404527, 404444
Accounts Department ( ငွေစာရင်းရုံး )
Phone : 032-30200, 032-30220, 032-30090, 032-30247
Fax : 032-30260
Directorate of Procurement ( ပစ္စည်း ဝယ်ယူမှု ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး )
Phone : 032-30227, 032-30234, 032-30205
Fax : 032-30241
Ministry of Electricity and Energy ( လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 410666, 410483 ,410072, 411060
Fax : 411012
Electric Power Generation Enterprise ( လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း )
Phone : 8104278, 8104279
Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) ( မြန်မာ့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်း )
Phone : 411096
Fax : 411125
Electric Power Planning Department, Office No.(6) ( လျှပ်စစ် စွမ်းအား စီမံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၆) )
Phone : 411577
Fax : 411106
Myanma Petrochemical Enterprise (MPE) ( မြန်မာ့ ရေနံဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်း )
Phone : 411109
Fax : 411126
Electricity Supply Enterprise ( လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်း )
Phone : 8104244, 8104245
Fax : 8104246
Myanma Petroleum Products Enterprise (MPPE) ( မြန်မာ့ ရေနံထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း )
Phone : 411117
Fax : 411281
Hydropower Implementation Department ( ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 8104190, 8104189, 8104191, 8104298
Fax : 8104184
Power Transmittion and System Control Department ( လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 410074, 410218, 410063, 410209, 410282
Ministry of Ethnic Affairs ( တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 409554, 409551
Fax : 409497
Ministry of Foreign Affairs ( နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 412344
Fax : 412396
Website : www.mofa.gov.mm
ASEAN Affairs Department ( အာဆီယံ ရေးရာ ဦးစီးဌာန )
Phone : 412348, 412360, 412357
Planning and Administrative Department ( စီမံကိန်းနှင့် စီမံရေးရာ ဦးစီးဌာန )
Phone : 412339, 412342
Consular and Legal Affairs Department ( ကောင်စစ်ရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာ ဦးစီးဌာန )
Phone : 412063
Political Department ( နိုင်ငံရေးရာ ဦးစီးဌာန )
Phone : 412359
Duty Office ( တာဝန်မှူး ရုံးခန်း )
Phone : 412009
Protocol Department ( သံတမန်ရေးရာ ဦးစီးဌာန )
Phone : 412395
International Organizations and Economic Department ( အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 412352~3
Ministry of Health and Sports ( ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 411452, 411159, 411246
Food and Drug Administration Department ( အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 403170, 403467, 403073, 403490
Fax : 403165
Medical Research Department (Upper Myanmar) ( ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန (မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်း) )
Phone : 085-2050209, 085-2050439, 085-2050251
Fax : 085-2050251
Website : www.dmr-um.gov.mm
Health Professional Resource Development and Management Department ( ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 411025, 411023
Fax : 411150
Medical Services Department ( ကုသရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 411001, 411388, 411384
Medical Research Department (Central Myanmar) ( ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန (မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း) )
Phone : 403172, 403487
Public Health Department ( ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 431072, 431080, 420268, 431478
Fax : 431073
Traditional Medicine Department ( တိုင်းရင်းဆေး ပညာဦးစီး ဌာန )
Phone : 431088, 431087
Fax : 431089
Website : www.dtm.gov.mm
Sport and Physical Education Department ( အားကစားနှင့် ကာယပညာ ဦးစီးဌာန )
Phone : 406202
Website : www.spedmyanmar.com
Planning and Research Section ( စီမံကိန်းနှင့် သုတေသန ဌာနခွဲ )
Phone : 8103285
Admin Section ( စီမံ၊ ဘဏ္ဍာဌာနခွဲ )
Phone : 406238, 406039
Sport and Education Section ( အားကစားနှင့် ပညာရေး ဌာနခွဲ )
Phone : 406178
Competition and Training Section (1) ( ယှဉ်ပြိုင်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဌာနခွဲ (၁) )
Phone : 406024, 406025, 406236
Sport Gound and Stadium Section ( အားကစားနှင့် အားကစားရုံ ဌာနခွဲ )
Phone : 413835
Competition and Training Section (2) ( ယှဉ်ပြိုင်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဌာနခွဲ (၂) )
Phone : 8103270
Sport Medical Section ( အားကစား ဆေးဘက် ဌာနခွဲ )
Phone : 8103282
Mass Sport and Education Section ( လူထု၊ ပညာဌာနခွဲ )
Phone : 406026, 406027
Fax : 406027
Ministry of Hotels and Tourism ( ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 406454, 406056, 406466, 406061
Fax : 406060, 406464
Directorate of Hotels and Tourism ( ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန )
Phone : 406078, 406131, 406082
Fax : 406108, 406100
Directorate of Hotels and Tourism Services Development ( ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 406144, 406102, 406080~1
Fax : 406079
Ministry of Industry ( စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန )
Fax : 405135, 405044
Phone : 405320, 405174, 405049, 405325, 405126, 405148, 405422, 405054
Website : www.industry.gov.mm
Directorate of Industrial Collaboration ( စက်မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 405050, 405334, 405333
Fax : 405052
No.(1) Heavy Industries Enterprise ( အမှတ်(၁) အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း )
Phone : 405171, 405123, 405335, 405059, 405060, 405055
Fax : 405178, 405158
Directorate of Industrial Supervision and Inspection ( စက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 408290, 408210, 408367, 408191, 408291, 408379
Fax : 408378, 408079
Website : www.disi.gov.mm
No.(2) Heavy Industries Enterprise ( အမှတ်(၂) အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း )
Phone : 408351, 408372, 408296, 408183, 408207, 408189
Fax : 408074, 408407
Myanma Pharmaceutical Industries ( မြန်မာ့ဆေးဝါး လုပ်ငန်း )
Phone : 408149, 408140
Fax : 408195, 408381
No.(3) Heavy Industries Enterprise ( အမှတ်(၃) အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း )
Phone : 408335, 408293, 408156, 408375
Fax : 408129
Ministry of Information ( ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 412020, 412327~8
Website : www.moi.gov.mm
Information and Public Relations Department ( ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 412242, 412370
News and Periodicals Enterprise ( သတင်းစာနှင့် စာနယ်ဇင်း လုပ်ငန်း )
Phone : 412123, 412125
Fax : 412124
Myanma Radio and Television ( မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား )
Phone : 79483, 79471, 79079
Printing and Publishing Department ( ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 412205, 412374
Nay Pyi Taw Press ( နေပြည်တော် သတင်းစာတိုက် )
Phone : 36186, 36108
Fax : 36139
Ministry of Labour, Immigration and Population ( အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီး ဌာန )
Phone : 430079, 431010, 431008, 431011, 431009, 431006, 431013
Fax : 430083, 431013, 431008
Website : www.mol.gov.mm, www.mip.gov.mm
Factories and General Labour Laws Inspection Department ( အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 430112~4, 430391
Fax : 431039, 431036
National Registration and Citizenship Department ( အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်နှင့် နိုင်ငံသား ဦးစီးဌာန )
Phone : 401024, 401047, 401055
Immigration Department ( လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 431043, 431125, 431038, 431043, 431500, 431061
Population Department ( ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန )
Phone : 431359, 431066, 431068, 431336
Fax : 431065, 431064
Website : www.dop.gov.mm, www.dopelibrary.gov.mm
Labour Department ( အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 430089, 430090~5
Social Security Board ( လူမှုဖူလုံရေး အဖွဲ့ )
Phone : 417907, 417909, 417912, 417914, 417916, 417923, 417925
Labour Relations Department ( အလုပ်သမားရေးရာ ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 430289, 430115, 430146
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation ( သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 405004, 405007, 405084, 409019
Fax : 405071,409010
Website : www.moecaf.gov.mm, www.mining.gov.mm
Dry Zone Greening Department ( အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်း စိုပြေရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 405010
Fax : 405387
Extension Division ( တိုးချဲ့ ပညာပေးရေး ဌာန )
Phone : 405113
Environmental Conservation Department ( ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 431491, 431326
Finance Division ( ဘဏ္ဍာရေးဌာန )
Phone : 405396
Admin Division ( စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာန )
Phone : 431342
Forest Research Institute ( သစ်တောသုတေသန ဌာန )
Phone : 416523
Natural Resources Conservation and Environmental Impact Assesment Division ( သယံဇာတ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ရေး ဌာန )
Phone : 431497
Inspection Division ( စစ်ဆေးရေးဌာန )
Phone : 405116
Policy, International Relation and Training Research Division ( မူဝါဒ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးနှင့် လေ့ကျင့်၊ သုတေသန ဌာန )
Phone : 431498
Natural Forest and Plantation Division ( သဘာဝတောနှင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ဌာန )
Phone : 405019
Pollution Control Division ( ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု ကာကွယ်ရေး ဌာန )
Phone : 431319
Planning and Statistic Division ( စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်း ဌာန )
Phone : 405399
Forest Department ( သစ်တောဦးစီး ဌာန )
Phone : 405407, 405180, 405018
Training and Research Development Division ( လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုတေသန ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန )
Phone : 405112
Administration Division ( စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာန )
Phone : 405401
Watershed Management Division ( ရေဝေရေလဲဒေသ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန )
Phone : 405115
Zoological Gardens Division ( တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ်များ ဌာန )
Phone : 405156
Geological Survey and Mineral Exploration Department ( ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တု ရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 414425, 414924, 414043
Myanma Pearl Enterprise ( မြန်မာ့ပုလဲ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း )
Phone : 414445, 414096, 414184
Mines Department ( သတ္တုတွင်းဦးစီး ဌာန )
Phone : 409017, 409018, 409378
No.(1) Mining Enterprise ( အမှတ်(၁) သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း )
Phone : 409161, 409381, 409011
Myanma Gems Enterprise ( မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း )
Phone : 414346, 414340, 414605
No.(2) Mining Enterprise ( အမှတ်(၂) သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း )
Phone : 409014, 409442, 409245
Ministry of Planning and Finance ( စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန )
Fax : 407004, 410189, 410191, 410184, 410059
Phone : 407023, 407017, 410596, 410594, 410185, 410184, 410198, 410046, 410186, 410181, 410191
Budget Department ( ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်း ဦးစီးဌာန )
Phone : 410451, 410456, 410530, 410529
Myanma Economic Bank ( မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ် )
Phone : 421326, 421327
Central Equipment Statistic and Inspection Department ( ဗဟိုစက်ပစ္စည်း၊ စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 406320, 406177, 406322
Fax : 406077
National Archives Development ( အမျိုးသား မှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာန )
Phone : 406143
Fax : 406159
Central Statistical Organization ( ဗဟို စာရင်းအင်း အဖွဲ့ )
Phone : 406328~9, 406347
Fax : 406151
Pension Department, Office No.(34) ( ပင်စင် ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄) )
Phone : 410416, 410445, 410415, 410419
Customs Department ( အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန )
Phone : 410060
Planning Department ( စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 407098, 407109
Fax : 407105
Financial Regulatory Department, Office No.(34) ( ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄) )
Phone : 410214, 410048, 410242, 410190
Fax : 410047
Revenue Appellate Tribunal, Office No.(46) ( အခွန်အယူခံခုံ အဖွဲ့ရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၄၆) )
Phone : 430171, 430042, 430044, 430045
Fax : 430170, 430172
Foreign Economic Relations Department ( နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 407153, 407152
Fax : 407548
Treasury Department, Office No.(34) ( ငွေတိုက် ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄) )
Phone : 410157, 410158, 410162, 410164, 410167, 410170, 410173
Ministry of Religious Affairs and Culture ( သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 406012, 406278, 406230, 406280, 408032, 408283, 408031, 408386
Fax : 406020,406189,408033, 408494
Website : www.mora.gov.mm, www.culturemyanmar.org
Archaeology and National Museum Departmant ( ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာန )
Phone : 408418, 408286, 408217, 408432, 408027, 408038, 408026
Fax : 408163
International Theravada Buddhist Missionary University ( အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် )
Phone : 406148
Fax : 406147
Website : www.itbmu.org.mm
Fine Arts Department ( အနုပညာ ဦးစီးဌာန )
Phone : 408034, 408165~6, 408036, 408035
Fax : 408443, 408164, 408264
Religious Affairs Department ( သာသနာရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 406016, 406046, 406001, 406232
Fax : 406013, 406049, 406252, 406251
Historical Research and National Library Department ( သမိုင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသား စာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာန )
Phone : 408344, 408436, 408382, 418425, 408383, 408337
Fax : 408459
The Promotion and Propagation of Sasana Department ( သာသနာတော် ထွန်းကား ပြန့်ပွားရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 406045, 406015, 406162
Fax : 406018
Website : www.spsumdy.org
Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement ( လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန )
Fax : 404335
Phone : 404022, 404021, 404373, 404337, 404197, 404116
Relief and Resettlement Department ( ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 404316, 404317~8, 404113, 404050
Fax : 404512, 404242
Social Welfare Department ( လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန )
Phone : 404103, 404102, 404032
Fax : 404034
Ministry of Transport and Communications ( ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန )
Phone : 407350, 411039, 411240, 411005, 411007, 411033, 411041, 405034, 405035
Fax : 411421, 411472
Website : www.mict.gov.mm
Central Institute of Transport and Communications ( ဗဟို ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း )
Phone : 064-23544, 064-23532, 064-23545, 064-23546
Myanma Post ( မြန်မာ့စာတိုက် လုပ်ငန်း )
Phone : 420611, 420555, 420883
Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems ( ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 411482
Myanma Posts and Telecommunications ( မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း )
Phone : 407661, 407567, 407385
Information Technology and Cyber Security Department ( သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 421777, 422622
Fax : 421110, 422633, 421222
Myanma Railways ( မြန်မာ့မီးရထား )
Phone : 77066, 77136, 77001~2
Inland Water Transport ( ပြည်တွင်း ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး )
Phone : 411443
Fax : 411042
Myanmar National Airlines ( မြန်မာ အမျိုးသား လေကြောင်း )
Phone : 411438, 411432, 411433, 411043
Fax : 411438, 411138
Marine Administration Department ( ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 411424
Fax : 411423
Website : www.iwt.gov.mm
Post and Telecommunication Department ( ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန )
Phone : 407225, 407435, 407226, 407487, 407228, 407640
Fax : 407216, 407539, 407227
Meteorology and Hydrology Department ( ဗဟို ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း )
Phone : 411031, 411526, 411446, 411422
Fax : 411449
Road Transport ( ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေး )
Phone : 405027, 405367, 405366
Road Transport Administration Department ( ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန )
Phone : 405028, 405145, 405361, 405355
Nay Pyi Taw City Development Committee ( နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ )
Phone : 410181, 410191
Administration Department ( စီမံရေးရာ ဌာန )
Phone : 8108161
Nay Pyi Taw City Development Committee (Sport Complex, Hospital, Bank, Highway Bus Compound and Markets) ( နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ (အားကစားရုံ၊ ဆေးရုံ၊ဘဏ်၊ အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းနှင့် ဈေးများ) )
Assessors Department ( ရာဖြတ်ဌာန )
Phone : 8108209
Arharya Thukha Market ( အာဟာရ သုခဈေး )
Phone : 38300
Budget and Account Department ( ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေစာရင်းဌာန )
Phone : 8108011
Cement Factory (Taung Phi Lar) ( ဘိလပ်မြေ စက်ရုံ (တောင်ဖီလာ) )
Phone : 013334013
Central Stores Department ( ဗဟိုပစ္စည်းထိန်း ဌာန )
Phone : 8108213
Phone : 414612
City Planning and Land Admin Department ( မြို့ပြ စီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှု ဌာန )
Phone : 414263
Nay Pyi Taw Bawga Thiri Highway Bus Compound ( နေပြည်တော် ဘောဂသီရိ အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နား စခန်း )
Phone : 26149
Committee Office ( ကော်မတီရုံး (မြို့တော်ခန်းမ) )
Phone : 414945, 432547
Fax : 414796
Nay Pyi Taw Brick Factory ( နေပြည်တော် အုတ်စက်ရုံ )
Phone : 432311, 432322
Coordination Department ( ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဌာန )
Phone : 414296
Nay Pyi Taw Myoe Ma Market ( နေပြည်တော် မြို့မဈေး )
Phone : 420121
Fax : 432109
Nay Pyi Taw Sibin Bank Ltd. (Ottara Thiri) ( နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ် လီမိတက် (ဥတ္တရသီရိ) )
Phone : 417781
Engineering Department (Building) ( အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) )
Phone : 8108212
Nay Pyi Taw Sibin Bank Ltd. (Zabu Thiri) ( နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ် လီမိတက် (ဇမ္ဗူသီရိ) )
Phone : 422581
Engineering Department (Roads and Bridges) ( အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းတံတား) )
Phone : 432490
Nay Pyi Taw Thapyay Kone Market ( နေပြည်တော် သပြေကုန်းဈေး )
Phone : 414015
Engineering Department (Water and Sanitation) ( အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့် သန့်ရှင်းမှု) )
Phone : 403524
Pobba Thiri Market ( ပုဗ္ဗသီရိဈေး )
Phone : 500135
Garden and Playground Parks Department ( ပန်းဥယျာဉ်နှင့် အားကစားကွင်းများ ဌာန )
Phone : 8108214
Pyinmanar Myoe Ma Market ( ပျဉ်းမနား မြို့မဈေ )
Phone : 22968
Health Department ( ကျန်းမာရေးဌာန )
Phone : 8108215
Tatkone Market ( တပ်ကုန်းဈေး )
Phone : 70131
Inspection Department ( စစ်ဆေးရေး ဌာန )
Phone : 414616
Thiri Yadanar Shopping Complex ( သီရိရတနာ အဆင့်မြင့်ဈေး )
Phone : 420700
Markets Department ( ဈေးများဌာန )
Phone : 414168
Zabu Thiri Hospital ( ဇမ္ဗူသီရိ ဆေးရုံကြီး )
Phone : 550153, 550151, 550150
Motor Transport and Workshop Department ( စက်ရုံနှင့် မော်တော်ယာဉ် ဌာန )
Phone : 432081
Nay Pyi Taw City Development Committee (Township Administration Offices) ( နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ (မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးများ) )
Nay Pyi Taw Guest House (1) ( နေပြည်တော် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ (၁) )
Phone : 432056
Dekkhina Thiri Township ( ဒက္ခိဏသီရိ မြို့နယ် )
Phone : 419022
Nay Pyi Taw Guest House (2) ( နေပြည်တော် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ (၂) )
Phone : 432012
Lewe Township ( လယ်ဝေး မြို့နယ် )
Phone : 30007
Pollution Control and Cleaning Department ( ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေး ဌာန )
Phone : 414621
Ottara Thiri Township ( ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ် )
Phone : 437019
Production Department ( ထုတ်လုပ်ရေး ဌာန )
Phone : 8108012
Pobba Thiri Township ( ပုဗ္ဗသီရိ မြို့နယ် )
Phone : 510130
Public Relations and Information Department ( ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေး ဌာန )
Phone : 8108216
Pyinmanar Township ( ပျဉ်းမနား မြို့နယ် )
Phone : 22044
Revenue Department ( အခွန်ဌာန )
Phone : 8108210
Tatkone Township ( တပ်ကုန်း မြို့နယ် )
Phone : 70004
Security and Discipline Department ( လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ဌာန )
Phone : 8108217
Zabu Thiri Township ( ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ် )
Phone : 420503
Veterinary and Slaughter House Department ( တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် သားသတ်ရုံများ ဌာန )
Phone : 8108211
Zeyar Thiri Township ( ဇေယျာသီရိ မြို့နယ် )
Phone : 75002~3
Nay Pyi Taw Council ( နေပြည်တော် ကောင်စီ )
Nay Pyi Taw General Administrative Department ( နေပြည်တော် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာန )
Phone : 550135
Phone : 550210
Phone : 550209
Phone : 550215
Phone : 550204
နေပြည်တော် ကောင်စီ (စီမံ၊ လုံခြုံဌာနခွဲ) တာဝန်မှူး
Phone : 550136
Phone : 550213
နေပြည်တော် ကောင်စီ (စီးပွား၊ လူမှုဌာနခွဲ)
Phone : 550137
Phone : 550212
နေပြည်တော် အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့
Phone : 550272
Phone : 550211
နေပြည်တော် မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်မှု ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့
Phone : 550273
Office of The Auditor General of The Union ( ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး )
Phone : 407218, 407287, 407328
Admin, Training and Research Department ( စီမံရေးရာ၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုတေသနဦးစီး ဌာန )
Phone : 407335, 407327, 407334
Auditing Department ( စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 407283, 407202, 407332, 407506, 407331, 407326
The Supreme Court of The Union ( ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ် )
Fax : 430313
Website : www.unionsupremecourt.gov.mm
Phone : 430312, 430337, 430302, 430310, 430307
The Union Constitution Tribunal ( နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး )
Fax : 430262
Phone : 430259, 430249, 430263, 430239, 430245, 430240, 430261, 430264, 430265, 430241, 430267, 430266
Duty Office ( တာဝန်မှူးရုံး )
Phone : 430268
Union Civil Service Board ( ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန် အဖွဲ့ )
Phone : 409057, 409190, 409060
Fax : 409045
Website : www.ucsb.gov.mm
Central Institute of Civil Service (Upper Myanmar) ( ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အထက် မြန်မာပြည်) )
Phone : 02-50001, 02-50005
Fax : 02-50050
Website : www.ucsb.imis.com.mm
Civil Service Selection and Training Department ( ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန )
Phone : 409165, 409052, 409430
Fax : 409208, 409540, 409083, 409459
Civil Service Affairs Department ( ဝန်ထမ်းရေးရာ ဦးစီးဌာန )
Phone : 409058, 409171~2, 409174
Fax : 409175
Union Election Commission ( ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး )
Phone : 404228, 404470, 404475
Fax : 404474
Admin Department ( စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာန )
Phone : 404208
External Relation Department ( ပြင်ပ ဆက်ဆံရေး ဌာန )
Phone : 404229
Phone : 404216
Fax : 404231
Research and Record Department ( သုတေသနနှင့် မှတ်တမ်းဌာန )
Phone : 404202, 404313